China Resistance band ifektri kanye nabaphakeli | Feiqing
Ama-Resistance band ahlinzeka ngezindlela ezingenamkhawulo zokusebenza futhi alungele ukufudumeza izitho ezingezansi nezingaphezulu kanye nokwenza kusebenze imisipha. Ziyithuluzi lokuqeqesha elisebenza kahle futhi eliguquguqukayo elingasetshenziswa ukukhulisa amandla nokuzinza emzimbeni ophezulu nangaphansi.
Okuguquguqukayo Nokuhlala Njalo: Amabhendi ethu okusiza wamandla / wokudonsa anikezela ukuqeqeshwa okusebenzayo kokumelana. Ilungele ukuqeqeshwa kokumelana nomzimba kanye nokwelashwa ngokomzimba ukusiza ukuqinisa imisipha noma imisipha edabukile.
Ilungele ukudonsa okusizwayo, ama-Pilates, Ukuhamba, i-Powerlifting, ama-Chin-ups, i-Yoga, Ukwelula, i-Gymnastics, ukwelashwa ngokomzimba, ama-push-up, nosizo lwe-barbell.
Ama-squats, i-Bench Press, i-Shoulder Press, i-Warm-Ups, i-Fat Burning. ukusebenzisa ekhaya nokuqina ekhaya noma ejimini.
Yenziwe ngezinto zemvelo zelatex, nokunwebeka, ukuqina, ukugqoka ukumelana futhi kuzohlala kuyisicaba ngisho nangemva kokululeka ngokweqile. Ikhwalithi yethu idlula ukuncintisana kwethu okunikela ngezinto ezingabizi kanye nokwakhiwa okungalungile.
Imihlahlandlela yokusetshenziswa komkhiqizo:
(Ama-35 lbs): Kuhle kakhulu ukuqeqeshwa kwe-barbell yejubane nokuhamba kwehlombe.
(Ama-55 lbs): Amabhendi aqala ukumelana nokuqeqeshwa kwebhande le-barbell noma usizo olunomkhawulo lokudonsa.
(Ama-65 lbs): Ukungezwani okulingene kokuqeqeshwa kokumelana nokusiza phezulu.
(Ama-lbs ayi-100): Ilungele ukusizwa kokudonsa, ukungezwani okuphezulu kokumelana nokuqeqeshwa okuthuthukile kwe-barbell.
(140 lbs): Inikeza ngosizo olukhulu lokudonsa futhi luhle ngomsebenzi we-barbell.
(210 lbs): Okokugcina kosizo lokudonsa noma lomsebenzi we-barbell osizwayo. Ibhendi enkulu kakhulu yezinhlelo zokusebenza ezikhethekile.
Ukuzivocavoca Noma Kuphi:
Ngamaqembu wokuzivocavoca aphathekayo ongawasebenzisa ekhaya, ehhovisi, ehhotela, ejimini, ngaphandle nangaphakathi kokuhamba. Hlala ugcina amabhande wokumelana esikhwameni sakho sokuzivocavoca, noma ukuphi.
Ukudonswa phezulu kungabandakanya futhi kuqinise cishe wonke umzimba wakho ophezulu ngokunyakaza okulula kokuzidonsela phezulu kubha yokudonsa. Ilinganisa umsebenzi omningi ocindezelayo owenzayo, ithuthukisa imisipha yamandla asemuva, futhi yakhe umqolo oqoshiwe.Amabhande Wokuzivocavoca Oqinile - Qina futhi uqwebe i-gluteus yakho, izingalo, umlenze.
Langaphambilini I-Tactical Vest
Olandelayo: Ibhola lodonga
Ibhande Lokuqina Lokuqina